A Profile of Peter "Okwute" Obi, In Igbo Language | By Anthony Aniebo
Akọmndụ Nke Maazị Peter Gregory Obi | Odee Bụ Anthony Aniebo
Opinion • Profile
Ogene, Ichaka, Ikoro…. kụọnụ oo!!!
Igbo mma mma nụ….!!!
Igbo kwezụọ nụ ooo …….. !!!
Ọmụmụ na Ntolite Ya
Ndị be anyị, ọ dị mma bụrụkwa ihe ziri ezị kam dere ụnụ akọmndụ nke ezị nwaafọ Igbo jị eme ọnụ. Ụnụ makwa ọfụma na ọ bụ eziokwu na ụbọchị a mụrụ dimkpa n’ama ka amụkwara ịbe ya mana e nwere ndịịche makana agwọ niile bị n’ọhịa, mana ọ bụ Eke nwe ọhịa. Onye ekwe a na-akụrụ bụ nna anyị ukwu, ezị nwaafọ nna ya zụrụ nke ọma.
Dịka osịrị maasị Chukwu Okike, a mutara ndị Igbo nwata nwoke busọ mma aha ya bụ Maazị PETER GREGORY OBI n’ụbọchị ọnwa Julaị gbara abalị iri na itoolu n’afọ otu puku narị itoolu na iri isii na otu (1961) na obodo Ọnịcha nke dị na steetị Anambara. Maazị Obi nke onye ejị aha echichi “OKWUTE NDỊIGBO” maara bụ onye obodo Agụlụ nke dị n’okpuru ọchịchị imeobodo Anaọcha nọkwa na steetị Anambara. Ndịigbo kwuru sị, “na ebe onye nọ ka ọ na-awachị” ya mere Maazị Obi, onye ihe gbasara ndị Igbo na-anụ ọkụ n’obi, bịara ruọ ụlọ obibi ya na nọmba iri abụọ na abụọ n’okporo ụzọ (Niger drive), nke nọ na ebe ndị ọgaranya bị (GRA) n’obodo Ọnịcha.
Ka ọ gụchara ụlọakwụkwọ ọtaakara, nwaamadị a sịrị ebe ahụ gawa n’ogo sekọndịrị na nnukwu ụlọakwukwọ ‘CHRIST THE KING COLLEGE’ nke dị n’Ọnịcha. Ebe a ka ọ nọrọ lee ụle wayekị (WAEC) ma mekwa ọfụma. Ka ọ gụsịrị, o jiri ọsọ na ije zọbanye ụkwụ na nnukwu mahadum nke Naịjịrịa dị na Nsụka (UNN), ebe o nwetara ọzụzụ Amụmụche (fịlọsọfị) ma nwetakwa nzere puru ịche. Dịka onye ụbụrụ ya na-anụ ọkụ bụrụkwa onye ịgụ akwụkwọ gbasara azụmaahịa na-amasị, Maazị Obi tinyere ịsị n’ụlọakwụkwọ gbasara ọmụmụ azụmaahịa nọ na Legoosị ana-akpọ (Lagos Business School) n’asụsụ bekee.
Kaosilaadị, ndịigbo kwenyekwara na a na-amụ eze amụ, o teghị aka, Okwute ndịigbo gara na nnukwu ụlọakwụkwọ maka azụmaahia dị na mba Amerịka nke ana-akpọ (Harvard Business School, Boston). Ebe a ka ọ nọzịrị chụọ nta mmụta n’ogo dịkwa elu. N’ezie, ụnụ maara nke ọma na ụra tọwa ụtọ, e kwowa ya ekwowa, nke a mere Okwute ndịigbo jịrị were ọsọ na ịje chụrụ nta mmụta a dị elu zobanyekwa ụkwụ n’ụlọakwụkwọ dịgaasị icheiche na mba ofesi gbasara agụmaakwụkwọ dị n’azụmaahịa. Ọ bụkwa ezie na nwa nnụnụ na-agba egwu n’okporo ụzọ nwere mmụọnwụ na-etịrị ya egwu n’ọhia. Okwute ndịigbo nọkwa na mba ofesi nwere nweta ọzụzụ dịgasị icheiche gbasara ọchịchị obodo, ịzụahịa, ịmezị obodo na ndị ọzọ. Ụnụ tuoronụ m ya, ‘OKWUTE!!!’
Ọrụ Ndị ọ Rụgasịrị
Igbo mụrụ Nze mụọ Ọzọ, ụnụ ma nke ọma na otu onye nwe okeọkpa mana ịgwe mmadụ nwe olu ya. Ụnụ makwa nke ọma na ọ bụghị ndị niile kpụ okpu mmemme bụchaa dike. Ọ bụ ihe ziri ezi kam depụtara ụnụ ọrụ Maazị Obi rugasịrị rụọ taa.
Ka ọ gụsịrị akwụkwọ ma banyekwa n’ihe gbasara ndọrọndọ ọchịchị obodo, ọ zọrọ ọkwa gọvanọ ndị Anambara ma nwetakwa mmeri n’afọ puku abụọ na isii (2006). Ọ rụrụ ọrụ gọvanọ rụọ afọ puku abụọ na iri na anọ (2006-2014). Ọ bụkwara osote onyeisi (Nigeria Governor’s Forum) site n’afọ puku abụọ na asatọ rụọ afọ puku abụọ na iri na anọ (2008 -2014).
– Onyeisioche nchịkọta ndị gọvanọ n’ọdịda anyanwu (South East Governors’ forum, 2006 – 2014). Ọ rụrụ ọrụ dịka onye na-enye onyeisiala obodo anyị okwu ndụmọdụ gbasara nchekwa akụ (Honorary Special Adviser to the President on Finance, till May 2015), ma sorokwa n’otu Presidential Economic Management team.
– Maazị Obi rụrụ ọrụ dịka onyeisioche n’otu dịgasị icheiche. Ha gunyere otu ndịa n’asụsụ bekee: Board of Securities & Exchange Committee, Fidelity Bank plc, Guardian Express Mortgage Bank, Future Views Security Ltd, Paymaster Nigeria plc, Next International Ltd, Guardian Express Bank plc, Chams Nigeria plc, Emerging Capital and Card Centre plc. Ozokwa, Maazị Obi sokwa n’otu dị icheiche nke gbasara nhazị obodo, ezigbo ochichi, dgz.
Ka nwaamadị a rụrụ ogo ihe e ji nwoke eme, Ọ luru nwaanyị mara mma aha ya bụ Odozịakụ Margaret Brownson Usen. Ha mụtara ụmụ abụọ (ofu nwaanyị na ofu nwoke) aha ha bụ Gabriella Nwamaka Frances Obi na Greogory Peter Oseloka Obi.
N’ezie, Okwute ndịigbo tozuru etozu n’ihe gbasara ọchịchị nakwa mmezị obodo. Ụnụ tuoronụ m ya, “OKWUTE”!!!
Ọrụ Ọ Rụrụ Dika Onye Gọvanọ
Ọ ga-abụ ihe ọjọọ ma ọ bụrụ nam kọchaa banyere okwute ma chefuo ụfọdụ ọrụ dịgasị icheiche ọ rụrụ mgbe ọ nọ n’ọchịchị gọvanọ na steetị Anambara. Nke bụ eziokwu bụ, Maazị Peter Obi rụrụ ọrụ dị icheiche nke na mbịdọ dee ya n’akwụkwọ, ohere agaghị adị.
Ọ bụ ya bụ onye ịzịzị chịrị ọchịchị dịka gọvanọ Anambara steetị ụgbọrọ abụọ ma bụrụkwa gọvanọ mbụ enyere nkwanye ugwu nke ala anyị (National Award) oge ọ nọ na ọchịchị. Sitena atụmaatụ ya, ọtụtụ otu ndị mba ofesi dịka UNICEF, DFID, EUROPEAN Union dgz bịara na steetị Anambara ma nweka nkwekọrịta nke ọma n’etịtị ndị ọchịchị steetị Anambra.
Dịka onye ihe gbasara ahụịke na-amasị, Maazị Obi rụrụ ọtụtụ ụlọ ọgwụ dị icheiche. Ụfodụ n’ime ha bụ: Iyienu Hospital Ogidi, Our Lady of Lourdes Hospital Ihiala, Holy Rosary Hospital Waterside, St. Charles Borromeo Hospital Onitsha dgz. Ọ rụkwara nnụkwụ ụlọ ọgwụ agụmaakwọ na Ọka (Awka) aha ya bụ (Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu teaching hospital). Sịnụ ya “DAALỤ RINNE”!!
Ọzọkwa, Maazị Obi bụ onye ihe gbasara agụmaakwụkwọ na-anụ ọkụ n’obi, nke a mere ọ jir ruọ ụlọakwụkwọ dị icheiche. O nyekwara ụlọ akwụkwọ ndị a kọmputa (computer), ugbọala ma gbakpuoro ha mmịrị (borehole) na ihe dị ọzọ. Okwute ndịigbo rụkwara okporo ụzọ dị icheiche na Steetị Anambara, nyekwa ndị ntorobia ọrụ ma mmekwa ka steetị Anambara bụrụ ọ puru iche na ebe steetị ndị ọzọ nọ.
– 2007: Ndị ụlọ ọrụ SUN Newspapers nyere ya nkwanye ugwu dịka ‘nwoke nke afọ’ (Man of the Year).
– 2009: Ndị ụlọ ọrụ Thisday na Champions Newspapers chiri ya echichi dịka ‘Ezigbo gọvanọ a ga-atụkwasị obi (Trustworthy Governor) n’obodo Naijịrịa.
– 2010: Ndị ụlọ ọrụ West Africa ICT nyere ya nkwanye ugwu dịka ‘gọvanọ mara ihe gbasara kọmpụta nke ọma’ (ICT Governor of the Year).
– 2011: Nkwanye ugwu a na-kpọ (Zik Leadership Prize).
– 2012: Ndị ụka CMS (Anglican) nyere Maazị Obi kwanye ugwu dịka Ezigbo gọvanọ mara ka-esị ahazị akụnụba Obodo (Outstanding Financial Manager).
– 2012: Ndị otu Bill & Melinda Gates foundation nyere ya nkwenye ugwu dịka gọvanọ mara ọrụ gbasara mgbochi ọrịa ụmụaka.
– 2012: Ndị ụka Metọdịsị (Methodist) ala anyi chiri Okwute echichi dịka ‘Ezi Gọvanọ mara maka nchekwa akụnụba obodo’.
-2013: Ndị ụlọ ọrụ oyonyo Silverbird nyere ya nkwanye ugwu dịka ‘nwoke nke afọ’ (Man of the Year).
– 2014: Ndị ụlọ ọrụ Champion Newspapers chiri Okwute echichi dịka ‘ezi nwaafọ Igbo puru ịche’ (Outstanding Igbo Man of the Year).
– 2014: Ndị otu Nigeria Library Association nyere ya nkwanye ugwu nke a kporo (Golden merit award) maka nkwadọ ya n’ihe gbasara ọba akwụkwo (library) na steetị Anambra.
– 2015: Ndị ụka katọlịkị nke dayọsịs Ọnịcha nyere Okwute ndịigbo nkwanye ugwu puru ịche (Golden Jubilee award) maka nkwado ya na dayọsịs ọnịcha n’ihe gbasara ahụike, agụmaakwụkwọ dgz.
Igbo ndị ọma mụrụ nze mụọ ọzọ, n’ezie, Okwute ndịigbo bụ agụ nwoke e ji eme ọnụ. Toonu ya “DIKE”, Toonu ya “ODOGWU”!!!
Ya kpọtụba oo!!!
Igbo ndị ọma, ụnụ lee anya, Maazị Peter Obi tozuru oke ịzọ ma ịchị Obodo anyị bụ Naijịrịa n’afọ 2019 dịka osote onyeịsị ala sịte na ngalaba Peoples Democratic Party. N’ezie, anyị bụ ndịigbo nwere ịsịọma na nwanne anyị e jị eje mba nọchịtere anya n’ogo ndorondo ọchịchị Obodo anyị.
Ọ bụ ihe zịrị ezị n’anyị ga-akwadoya sịtena ịtụnyere ya vootụ anyị. Onye ọ bụla bụ nwaafọ Igbo ga-agba mbọ nweta mkpekele ntulịaka elu ya (pvc) ma chebịrị afọ 2019 ma hụkwana anyị kwadoro nwanne anyị nwoke bụ Maazị Peter Gregory Obi (OKWUTE NDỊIGBO).
Igbo mma mma nụ!!
First published by Anthony Aniebo on Facebook. Republished with permission | Follow @inquizimedia on Facebook and Twitter
2019 Elections Peter Obi
Ala Aburo Otu: The Cracks of Igbo Youth Voting As One
The Right ‘Dino Melaye’ For Atiku’s Campaign
2 Replies to “Akọmndụ Nke Maazị Peter Gregory Obi | Odee Bụ Anthony Aniebo”
Anthony Aniebo says:
Thank you so much Sir for publishing this article on your blog.
It was a pleasure to publish. Well done for a well written piece